शनिवार बिहानै फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्प, क्षतिको विवरण आउँदैं
काठमाडौं, १६ वैशाख । फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । मिनडानाओ आइल्याण्डको तटीय क्षेत्र केन्द्र विन्दु भएर ६ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।
काठमाडौं, १६ बैशाख । क्षेत्रीय रुपमा पाकिस्तानलाई एक्लाउन भारतले अघि सारेको उपक्षेत्रीय सञ्जालको अवधारणालाई भुटानले अस्वीकार गर्ने भएको छ। भारतको नेतृत्वमा नेपाल, बंगलादेश र भुटान मोटर भेइकल सन्धि (बीबीआईएएन) अघि
उत्तर कोरियासँग ४५ लाख सैनिक !
एजेन्सी: के तपाईलाई थाहा छ उत्तर कोरियाँसग कत्ति सैन्य शक्ति छ? यहाँका करिब एक तिहाई नागरिकहरु सैन्य प्रशासनमा सरिक भएका छन्। सैन्‍य बल उत्तर कोरियासँग करीब ७ लाख सक्रिय सेना
उत्तर कोरियासँग युद्ध नजिक पुगेको ट्रम्पको खुलासा : विश्वकै लागि खतरा बढ्यो
एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाको परमाणु र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका कारण एउटा ठूलो युद्ध हने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कूटनीतिक माध्यमबाट उत्तर कोरियासँगको विवादको हल गर्न
संसद भवन भित्र झडप , १० सांसद घाइते !
एक जना अल्बेनियाली जातीय नेता संसदको सभामुखमा निर्वाचित भएपछि मेसेडोनियाको संसदमा भिडन्तहरु भएका छन् । घाइते हुनेमा समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेतासहित कम्तीमा १० जना छन् । प्रदर्शनकारीहरु पूर्व प्रधानमन्त्री निकोला
भारतकै पकेट राज्य भुटानले दियो भारतलाई ठुलो झट्का,भुटानको यो निर्णयले पाकिस्तानलाई एक्लाएर उपक्षेत्रीय नेतृत्व लिने नरेन्द्र मोदी सरकारको रणनीतिलाई ठुलो धक्का पुगेको छ
काठमाडौं – क्षेत्रीय रुपमा पाकिस्तानलाई एक्लाउन भारतले अघि सारेको उपक्षेत्रीय सञ्जालको अवधारणालाई भुटानले अस्वीकार गर्ने भएको छ। भारतको नेतृत्वमा नेपाल, बंगलादेश र भुटान मोटर भेइकल सन्धि (बीबीआईएएन) अघि बढाउन भएको
यसकारण पाकिस्तानले भारतमाथि लियो एक्शन
इस्लामाबाद, १५ वैशाख । पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीले २९ जना भारतीय माझीलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएका छन् । देशको सामुद्रीक व्यापारसम्वन्धी नियमहरु उलङ्घन गरेको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारीले जनाएका
उत्तर कोरिया र अमेरिका बीच विश्वयुद्ध हुने सङ्केत हुदै गर्दा,भारतले गर्‍यो क्षेप्यास्त्र परीक्षण
भारतले बिहीबार मध्यम दुरीको आणविक क्षमताको अग्नी तृतीय नाम दिइएको क्षेप्यास्त्रको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको जनाएको छ। उक्त क्षेप्यास्त्र उडिसा प्रदेशको एउटा टापुबाट परिक्षण गरिएको भारतीय श्रोतले जनाएको हो। सो परमाणु
उत्तर कोरिया र अमेरिका बीच युद्द हुने संकेत गर्दै गर्दा पाकिस्तानले गर्यो भारत माथि आक्रमण, ३ भारतीय सैनिक मारिए
काठमाडौं, १४ वैशाख(एजेन्सी)। भारतको कश्मिर स्थित एक भारतीय सैनिक क्याम्पमा अतिवादीहरुले आक्रमण गरेका छन्। आक्रमणमा परि ३ भारतीय सैनिकको ज्यान गएको छ। कश्मिरको कुपावाडा जिल्ला भएको आक्रमणमा सेनाको प्रतिकारमा २
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भीषण विस्फोट
बैशाख । सिरियाको राजधानी दमासकसनजिकै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार बिहान सबेरै भीषण विस्फोट भएको बिशेष कारण नबताइ मानव अधिकार समूहले जानकारी दिएको छ । विस्फोटन भीषण भएको यसको आवाज दमासकसबाट